2013 September | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 2
ကာတွန်း စောငို – လေးစားလိုက်နာ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တယ် ဆိုတာ … စက်တင်ဘာ ၂၉ ၊ ၂၀၁၃
Saung Yun La – Issues
“ကိစ္စများ” ဆောင်းယွန်းလ၊ စက်တင်ဘာ ၂၉ ၊ ၂၀၁၃ ရပ်ထဲရွာထဲ ခွေးမဲမဲဟောင်သံကစပြီး ကမ္ဘာတ၀ှမ်းက မိုးထစ်ထစ်ချုန်းသံတွေ အဆုံးထိ တုံးလုံးပဲ အိပ်အိပ် မက်တပ်ပဲ မျက်စိတွေမှိတ်မှိတ် စိတ်ကိုဆေးဆိုးတဲ့ နာနာဘာဝ ခွေးသူခိုးတွေနဲ့ အတိတ်ကို...
Than WIn Hlaing – Women Behind Great Men ….
ပါရမီဖြည့်ဖက် အမျိုးသမီးကြီးများ သန်းဝင်းလှိုင်၊ စက်တင်ဘာ ၂၉ ၊ ၂၀၁၃ မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ အလောင်းတော်ရင့်မာ တစ်ကျိပ်အပါအဝင်ဖြစ်သော ဝေသန္တရာမင်းကြီး ဘဝက သားသမီး၊ သားမယားပါမကျန် အလှူဒါနပြုရာ၌ ရက်ရောလွန်းမှုကို မင်းကြီး၏ မိဘုရားကြီး...
Nay Thwin – Gang of Six and Amending 2008 Constitution
ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးနှင့် (၆) ဦးဂိုဏ်းကိစ္စနေသွင် ၊ စက်တင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၃ (ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြချက်) True News အတွဲ၅၊ အမှတ်၂၂ တွင်ဖော်ပြပါရှိသည့် ဆောင်းပါး….အင်စတီကျူးရှင်း အင်စတီကျူးရှင်းတွေ ကောင်း ရင် နိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရေး အောင်မြင်မယ်၊...
TheGeek – Obama vs GOP fights over USA
အမေရိကန်ပြည်အစိုးရနဲ့ လွှတ်တော်တို့ကြား ဘတ်ဂျက်နဲ့ ကျန်းမာရေးဥပဒေဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲများ နိုင်ငံတကာသာဂိ၊ စက်တင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၃ ဒီလကုန်မှာ အမေရိကန်ပြည်ရဲ့ အစိုးရဘတ်ဂျက် ပြဌာန်းပေးဖို့ လွှတ်တော်မှာ တာဝန်ရှိတယ်။ အတိုက်အခံ (ရီပတ်ဘလစ်ကန်) ကြီးစိုးတဲ့အောက်လွှတ်တော်က ဘတ်ဂျက်ကို...
Cartoon Maung Yit – 25 year birthday – who?
ကာတွန်း မောင်ရစ် – ၂၅ နှစ် မွေးနေ့ ကာတွန်း စက်တင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၃
Ko Aung Hmine – Enough is Enough, Burmese Regime’s Parliament
တော် … တော် … တော် … လွတ်တော် ကိုအောင်မှိုင်း၊ စက်တင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၃ ဆရာမင်းလူကတော့ ၁၉၈၉ မှာ တော်တော် လို့မြည်နေတဲ့ တပ်မတော်လို့ ကင်မွန်းတပ်ခဲ့တယ်။ တိုင်းပြည်ကို...
Ku Mo Jo – Politics outside Regime’s Parliament
ကာတွန်း ကူမိုးကြိုး -လွှတ်တော်ပြည်ပနိုင်ငံရေး … စက်တင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၃
မောင်စွမ်းရည်မျက်နှာဖုံးနဲ့ ထုတ်ဝေမယ့် ပိတောက်ပွင့်သစ် စက်တင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၃ အလင်္ကာ စာအုပ်တိုက်မှ စီစဉ်ထုတ်ဝေသာ ပိတောက်ပွင့်သစ် စာပေအနုပညာ မဂ္ဂဇင်း အမှတ်(၅၂)၊ အောက်တိုဘာလထုတ် ဆရာ မောင်စွမ်းရည် မျက်နှာဖုံးဖြင့် ထွက်တော့မည်… လို့ အလင်္ကာ...
Ko Mya Aye’s songs
အပြာရောင်အင်္ကျီဝတ်ပြီး ရေးစပ်ခဲ့သော သီချင်းများ နားထောင်ရတော့မည်ဟန်သစ်နိုင်စက်တင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၃ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း ကိုမြအေးက ထောင်ထဲတွင် သူရေးစပ်ခဲ့သော အပြာရောင်သက္ကရာဇ်များ တေးစီးရီးကိုကို ကြာသပတေးနေ့က ရန်ကုန်မြို့တွင် မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ရာ ၄င်း၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း ရဲဘော်ရဲဘက်များ၊...
ကိုဇာဂနာ နာမကျန်းဖြစ်နေ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ဓာတ်ပုံများမှ တဆင့် သိရ မိုးမခသတင်းကောက်နုတ်ချက်၊ စက်တင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၃ လွန်ခဲ့သည့် ၂၄ နာရီ၊ သီးလေးသီးအငြိမ့်၏ အကမင်းသမီးတဦးဖြစ်သူ မီးသီး၏ ဖေ့စ်ဘွတ်တွင် တင်ထားသည့် ဓာတ်ပုံများအရ မြန်မာပြည်၏...
မင်းတို့ကတော့ ပျော်မြူးနေကြ … ဒီမှာက ဘဝတွေ စုတ်ပြတ်သတ် ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) စက်တင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၃ ကျွန်တော်တို့ မဟာရန်ကုန်မြို့ကြီးသည်လည်း ဒေဝါမိုး၏ ထစ်ချုန်းမှုကြောင့် ရပ်ကွက်များ၊ မြို့နယ်များ၊...
Min Tayar – Poem
အပ္ဗမာဒေန သမ္ပ္ဗာဒေထ မင်းတာရာ စက်တင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၃ ပါးကို…ညင်..သာစွာလှည့်..နားကိုရိုက်တာလား နားအရောင်ထွက်စေလှည့်စေပြီး ပါးရိုက်တာလား ဝေဒနာ ဖြေသာဖို့ က ပျဉ်ဖိုးအထပ်ထပ်နဲ့ မို့ မယုံရဲရဲ အရေခွံလဲလိုက်ရုံနဲ့ ….ဖါးလောင်းတွေက ဘ၀ပြောင်း (သွေးအလိမ်းလိမ်းဓါးချ...
မြန်မာမင်းတို့၏ ဆင်ဖြူတော် သန်းဝင်းလှိုင် စက်တင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၃ မြန်မာမင်းတို့သည် ဆင်ဖြူတော်ကို ရတနာအဖြစ် သတ်မှတ်ကြသည်။ ရှေးဦးပျူခေတ် (အေဒီ ၁ ရာစုမှ ၉ ရာစု) ကပင် ဆင်ဖြူတော်ကို အထွတ်အမြတ်...
ပြည် – ကြို့ပင်ကောက် ရေဘေးဒုက္ခသည်များနှင့် ကျွနု်ပ်တို့ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်)စက်တင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၃ အထက်ဗမာပြည်သမိုင်းဝင် ဒီပဲယင်းရွာ ဝန်းကျင်မြို့ရွာအသီးသီး၏ မြို့ခံ၊ ရွာခံ ပြည်သူလူထုနှင့် လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ဗြဟ္မစိုရ်ခြေလှမ်းဟောပြောပွဲများ...
ကာတွန်းစောငို – မိုးပေါ် ထောင်မပစ်ဘူး … စက်တင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၃
Moe Moe (Pa Thein) – San Fran, Black Coffee and Pa Thein Lakes
ဆန်ဖရန်ညနဲ့ ကော်ဖီခါးခါး (သို့မဟုတ်) ပုသိမ်ကန်သုံးဆင့်နဲ့ ဆောင်းညအမှတ်တရများ မိုးမိုး(ပုသိမ်)၊ စက်တင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၃ ဒီနေ့ စက်တင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၃၊ အစီစဉ်မရှိပါဘဲ ဆန်ဖရန်စစ်စကိုရဲ့ စတိတ်ရှိုးပွဲကိုရောက်သွားခဲ့လို့ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း သုံးဆယ်နီးပါးလောက် ကိုယ့်ရဲ့ရင်ခုန်သံတွေကိုပြန်ရခဲ့တယ်။...
BCBG – Sydney Asutralia – Nu Nu Yi INwa, Jue, Chit Oo Nyo
ဆစ်ဒနီမြို့ စက်တင်ဘာ ၁၄၊ မြန်မာစာပေဟောပြောပွဲ နုနုရည်(အင်းဝ)၊ ဂျူး၊ ချစ်ဦးညို BCBG သြစတြေးလျ မြန်မာ့အသံက ရိုက်ကူးတင်ဆက်သည်
Nat Si – Short Stoires
ဘုန်းနှင့်ကံနှင့် လူငယ်တွေ နတ်စည် စက်တင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၃ “ဘုန်းဘုန်း “ဘုန်း”ဆိုတာ ဘာကိုခေါ်တာ လဲ” မျက်ခုံးတွေ ကျုံ့သွားရတယ်။ မေးခွန်းဟာ ဃဂနဏမသိကြတဲ့ ပြဿနာ၊ လွယ်မယောင်နဲ့ ခက်၊ တိမ်မယောင်နဲ့ နက်တဲ့...